Somali | DIY Streets – Turnpike Lane/West Green
Mashruuca Sustrans DIY ee Turnpike Lane waa juhdi socon doona laba sannadood oo la rabo in lagu sameeyo – iyadoo lala kaashanayo London Borough of Haringey – Arrinta ku saabsan guryaha oo ah guryo kiradooda la goyn karo, oo ay beeshu hawlwadeen ka tahay. Mashruucu wuxuu xoogga saarin doonaa degmooyinka koonfur ka xiga Istayshanka tarreenka ee Turnpike Lane, oo ay ku jiraan Langham, Waldeck, Stanmore, Carlingford, Mannock, iyo Downhills Park Roads.
Mandaqadad waxa waxyeelleeyay gawaadhi xawaare dheereeya ku marta iyo jiir muddo dheer ah dhex socday. Nidaamka DIY ee qaabaynta dariiqyadu waxay suuragelisaa dhawr arrimood oo ay ku kuraan in barxado bannaan la helo, kadibna dadka loo qorsheeyo, iyo in qawaaniin cusub loo sameeyo daeewallada. Ka qayb qaadashada beeshu waa cusur muhiim ah oo mashruuca ka mida – inta badan dadka deegaanku waxay dareemaan inay dibedda ka yihiin siyaabaha loo gaadho go’aammada beeshooda saamynta kuleh. Mashruucani wuxuu awood siinayaa dadka beesha deggan waxaanuu u oggolaanayaa inay sameeyaan barxado ku habboon inay dadku ku kulmaan, ijtimaaci ahaan isugu yimaaddaan oo ay ku ciyaaraan.
Bilaha soo socda waxaad fursad u heli doontaa inaad ka faallooto, oo aad wax ku soo biiriso, qorshaynta taas oo si wayn oo wacan wax uga beddeli doonta beeshaada. Taariikhahaas waxa lagu iclaamin doonaa warsidaha guriga kuugu soo dhaca, iyo internetka – www.diyturnpikelane.wordpress.com
Ra’yiga aad ku soo biiriso iyo ka qayb qaadashadaadu waxay daruuri u yihiin guusha laga gaadho mashruucan, sababta oo ah waxaannu rajaynaynaa inaannu dhisno beel ishaysata oo saaxiibtinimo leh. Qaar badan oo ka mida qorshayaasha aannu ku tusi doonno kulanku waa qaar ah muuqaal oo aan u baahnayn inaad ingiriisida akhriyi karto.
Haddii aad hayso wax su’aalo ah ama faallooyin fadlan Ben Addy kala soo xidhiidh Sustrans.
Telefoonka ah – 0207-017-2357